Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း)
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲပါ။ သင့်ကိုပေးထားသမျှ အချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ။ ညွှန်ကြားသည်များကိုသေချာလိုက်နာပါ။
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Trimipramineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Trimipramineကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Trimipramineဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသော ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Trimipramineအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Trimipramineတွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် ဆေးများisocarboxazid, phenelzine, tranylcypromine ၊ ပါကင်ဆွန်ရောဂါအတွက် ဆေးများselegiline or rasagilineတို့ကို ၁၄ ရက်အတွင်းသောက်ထားလျှင်။ ထိုဆေးများသောက်ထားသည့် ၁၄ ရက်အတွင်းTrimipramineကိုသောက်မိပါကသွေးစောင့်တက်နိုင်ပါသည်။
Linezolid or methylene blueဆေးများသောက်နေရလျှင်။
သင်ဤဆေးသောက်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုပြောပါ။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များ၊ သွားဆရာဝန်များ ပါဝင်ပါသည်။
Trimipramine က ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက်ပုံအားမသိရသေးမချင်းကားမောင်းခြင်း နိုးကြားရန်လိုသည့် အလုပ်များလုပ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်းတို့အားလျော့ချရန်အတွက် ထိုင်ရာ၊ လှဲရာမှထလျှင် ဖြည်းဖြည်းချင်းထပါ။ လှေကားအတက်အဆင်းများကိုဂရုစိုက်ပါ။
ဆေးကိုရက်သတ္တပတ်များစွာသောက်ပြီးပါကဆေးကိုမရပ်ခင် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ Trimipramineကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်ရန် လိုပါလိမ့်မည်။
တက်ခြင်း၊ ယခင်ကတက်ဖူးခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
သင့်လှုပ်ရှားမှုကိုနှေးစေမည့်ဆေးများ၊ သဘာဝဆေးများမသုံးခင် ဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆွေးနွေးပါ။
တစ်ချို့သူများတွင် Trimipramineကြောင့် မျက်လုံးပြဿနာများ ဖြစ်တတ်၏။ မျက်လုံးပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ချေများက ဆရာဝန်မှ သင့်ကိုမျက်လုံးစစ်ခြင်းလုပ်ခိုင်နိုင်ပါသည်။ မျက်လုံးနာခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြောင်းခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့်တစ်ဝိုက် နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။
နေလောင်လွယ်နိုင်သည်။ နေရောင်၊ နေမီးအိမ်နှင့် နေပူဆာလှုံခြင်းများကိုရှောင်ပါ။ နေလောင်ကာဆေး၊ အဝတ်အစားရှည်ရှည်၊ နေကာမျက်မှန် စသည်တို့ကိုသုံးပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားစဉ်နှင့် ပူသောအချိန်တွင် ဂရုစိုက်ပါ။ ရေဓါတ်မနည်းစေရန် အရည်များများသောက်ပါ။
၆၅ နှစ်အထက်များတွင် ဆေးကိုသတိနှင့်သုံးရမည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ Trimipramineကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မသုံးခင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများအတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
နို့တိုက်နေရပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ ကလေးတွင်ဖြစ်နိုင်မည့် အန္တရာယ်များကိုဆွေးနွေးရန် လိုပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ – အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ အရေပြားကွာခြင်း၊ အဖျားရှိချင်ရှိမည်၊ နှာချေခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရ စကားပြောရခက်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအသံသြလာခြင်း၊ မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွလာခြင်း။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သေနိုင်သည်အထိဖြစ်တတ်သော Serotonin Syndrome ဖြစ်တတ်ပါသည်။ တခြားသောစိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ကုဆေးများ၊ တစ်ချို့ဆေးများနှင့် တွဲသောက်လျှင် ပိုဆိုးပါသည်။ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဟန်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးပူရှိန်းနေခြင်း၊ ကြွက်သားလှုပ်ခြင်းတောင့်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊ ချွေးအများကြီးထွက်ခြင်း၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ခေါင်းအပြင်းအထန်ကိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trimipramineသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Trimipramine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trimipramineသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စိတ်ကျရောဂါအတွက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသောက်ရန် ပုံမှန်ပမာဏ
ကနဦးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 75 mgကိုခွဲသောက်ရန်
ထိန်းညှိပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 50 to 150 mg
အများဆုံးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 200 mg
ကနဦးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 100 mgကိုခွဲသောက်ရန်
ထိန်းညှိပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 200 mg
အများဆုံးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 300 mg
စိတ်ကျရောဂါအတွက် အသက်ကြီးသူများသောက်ရန် ပုံမှန်ပမာဏ
ကနဦး: 50 mgနေ့စဉ်
ထိန်းညှိပမာဏ: 100 mgနေ့စဉ်
ကလေးတွေအတွက် Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Trimipramine (ထရိုင်မီပရာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Trimipramineကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Trimipramineကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Trimipramine. https://www.drugs.com/cdi/trimipramine.html. Accessed November 22, 2017
Trimipramine. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/27192. Accessed November 22, 2017